Sri Lanka: Notre-Dame an’i Madhu sy Ilay Eveka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Febroary 2018 13:18 GMT
Mihamanakaiky ny faritr'i Madhu ao amin'ny distrikan'i Mannar ireo tafikin'ny governemanta Sri Lanke ary nambara fa ho tombontsoa ho an'ny herintsain'ireo miaramila sy ny governemanta io fambaboana io. Ao anatin'ny hetsika firosoan'ny tafika, ny Evekan'i Mannar, i Reverend Rayappu Joseph dia nanisaka ny sarivongan'i Notre-Dame an'i Madhu hankany anatiny be amin'ny faritra ambany fifehezan'i LTTE. Nahazo fanehoankevitra mifamahofaho avy any amin'ny tontolon'ny blaogy Sri Lanke izany. heverina ho toerana katolika iray masina indrindra ao Sri Lanka ilay fasana, ary fantatra fa mahasarika ireo katolika, tsy anavahana izay foko niavian'izy ireo. Na eo aza ny maha-zava-dehibe azy, ny zava-misy any amin'ny faritra misy ny fifandonana dia midika fa vitsy mpivavaka mitsidika ilay toerana masina mandritra ny taona maro.
Tao anatin'ny lahatsorany Fotoana itenenan'ny Evekan'i Mannar, Bishop Rayauppu Joseph, nametra-panontaniana mafy i Lanka Libertarian momba ny antony nanosika ny fihetsik'ilay Eveka,
Namela ireo mpisorona teo ambaniny toy ireo voalaza etsy ambony izy mba handray anjara amin'ny fampielezankevitrin'ny LTTE ary tsy nifehy azy ireo raha ny fahafantarako azy. Nandray anjara tamin'ireo fampielezankevitra famoriambahoaka sy andraikitra hafa mihitsy ny Evekan'i Mannar, tafiditra ao anatin'izany ny fandevenana ilay mpamono olona nodorana toa an'i Thamilchelvan ary ninia tsy nahita ireo ankizy alefa hanao raharaha miaramila nandray anjara tamin'ny hetsika tahaka izany.
Izany rehetra izany dia mahatonga antsika hino fa mpiara-miasa an-tsitrapo amin'ny vondrona fasista mpamono olona izy.
Ao anatin'ny lahatsorany Fomba fijery: Notre-Dame an'i Madhu sy ny Evekan'i Mannar, nanolotra fomba fijery hafa ny Kanabona.com izay nilazany fa tsy afaka manao izay tiany ao amin'ny faritra voaaron'ny LTTE ny pretra iray tsy mitàna fitaovam-piadiana,
Raha ny filazana matetika momba ny fitanilàn'ny Eveka ao Mannar sy ireo pretra diosezianina manoloana ireo tigra, dia tsapany indray ny tsy firaharahiana tanteraka ny toe-javatra misy.
Amin'ny lafiny iray, niaro hatrany ny fandravonana am-pilaminana ny ady ilay Eveka. Nanameloka ny ady sy ny herisetra foana izy. Nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, nandefa antso tsy nahazoany valiny tamin'ireo mpanaraka azy izy mba hampihatra ny zon'izy ireo hifidy, mifanohitra tanteraka amin'ny baikon'ny LTTE tsy hanaovana izany. Nàmany be ilay Majaoro Jeneraly Parami Kulatunga, efa nodimandry – maneho ny fitanilàny manoloana ny krizy izany rehetra izany.
Tsy maintsy notsipihana fa ny ampahany betsaka amin'ny diosezin'i Mannar dia miankina amin'ny faritra fehezin'ny LTTE, ka ny evekan'i Mannar dia tsy afaka manohitra ny Tigers araka izay tiany. Mora amin'ny JHU ny mitabataba avy any amin'ny faritra voaaro tsara ao Colombo, kanefa asa tsy azo tanterahana izany ho an'ny pretran'Andriamanitra iray tsy mitàna fitaovam-piadiana hanohitra am-pahibemaso ny mpampihorohoro mampidi-doza indrindra eran-tany ao amin'ny faritaniny manokana.
Miresaka momba ireo olona tratra ao anatin'ny fifampitifirana ny transcurrents.com ary manohy manampy ny maha-zavadehibe io fambaboana an'i Madhu io ho an'ny Filohan ao anatin'ny lahatsorany Fiangonan'i Madhu: Niharan-doza tao anatin'ny Fifampitifirana ara-politika sy ara-miaramila.
Bodista mpivavaka be ny filoha Mahinda Rajapaksa, saingy katolika mpivavaka be ihany koa i Shiranthi Rajapaksa vadiny. Fotoana vitsy talohan'ny fampielezankeviny tamin'ny taona 2005, naniry ny hiaraka tamin'ny vadiny ho any amin'ny Fiangonan'i Madhu i Rajapaksa.
Satria anatin'ny faritra fehezin'ny LTTE ny fiangonana Madhu, notakiana tamin'ireo Tigra ny “fahazoandàlana” hanao fitsidihana. Praiministra i Rajapaksa tamin'izany. Napetraky ny LTTE ny fepetra hoe vantany vao tafiditra ny faritry ny LTTE, mila avelan'i Rajapaksa ireo pitsopitsony momba ny fiarovana azy ka miantehitra amin'ny Tigra mpanaradia irery ihany. Tsy azo nekena izany ka nofoanana ilay hevitra hoe hitsidika an'i Madhu.
Niantefa tany amin'ny sain'i Mahinda anefa ilay olana. Nandritra ny fampielezankeviny, nanamarika matetika izy fa fony izy Praiministra dia tsy navela hitsidika ireo faritra sasany tao amin'ny firenena.